Mizarà ny boky fivarotana tianao indrindra amin'ny alàlan'ny Audible | Martech Zone
Alakamisy, May 26, 2016 Talata, Jona 7, 2016 Douglas Karr
Efa elaela aho no mpanjifa Audible fa vao haingana aho no niverina. Ny atiny azo henoina dia ahitana programa audio maherin'ny 250,000 avy amin'ny mpanonta audiobook, fampielezam-peo, mpampiala voly, mpanonta gazety sy gazety ary mpamatsy vaovao. Audible koa no mpanome lohalaharana ireo vokatra am-peo miteny amin'ny iTunes Store Apple.
Manana fotoana bebe kokoa aho mihaino amin'ny boky raha mandeha aho na miasa fa tsy manokana fotoana hamakiana azy ireo. Mbola mamaky boky maro aho, saingy ny vokatra namokarako ho an'ny fanabeazana ny tenako sy ny fihazonana ny bokin'ireo namako farany dia nitombo be rehefa nanomboka nihaino boky aho.
Midira amin'ny fizahan-toetra maimaim-poana mandritra ny 30 andro
Ny fividianana audiobook anao dia tsotra amin'ny alàlan'ny finday. Ampidino ny re fampiharana. Azonao atao ny mahita boky am-peo ao anaty sehatra roa ary azonao atao ny mividy azy ireo amin'ny tranokala Audible na Amazon amin'ny alàlan'ny fidiranao Amazon. Mafy orina ny fikarohana ataon'izy ireo, azonao zahana amin'ny sokajy, sokajy isaky ny varotra, fifandraisany, na daty famoahana, mahita kinova fohy, ary safidy hafa iray taonina.
Vantany vao vita ny fividianana dia sokafy ny fampiharana Audible dia hisintona ny audiobook anao. Afaka mihaino ny audiobook ianao avy eo. Ny iray amin'ireo fiasa tena tiako dia ny ahafahako mampitombo ny hafainganam-pandeha izay didiana ny audiobook, ahafahako mihaino ilay boky amin'ny clip haingana kokoa.
Azo henoina ara-tsosialy
Reny vao nampidirina tolo-kevitra momba ny boky eo noho eo. Ity fampiasa vaovao ity dia ahafahan'ny mpihaino manome audiobook ananan'izy ireo ao amin'ny tranombokiny ho an'ny hafa avy hatrany amin'ny alàlan'ny mailaka, lahatsoratra, Facebook Messenger na WhatsApp, amin'ny alàlan'ny fitaovany iOS, Android ary Windows 10. Ny mpandray tsirairay dia mahazo ny anaram-boninahitra voalohany amin'ny alàlan'ny programa maimaim-poana, ary Audible dia handoa ny mpanoratra, ny mpilalao ary ny tompona zon'ny hafa mitovy lanja amin'ny lohateny voalohany an'ny mpandray!
Mora ampiasaina ilay fiasa. Tsindrio fotsiny ilay Alefaso ity boky ity kisary ao amin'ny tranombokinao, ary ny audiobook izay atoro anao dia ho maimaim-poana raha vao sambany mandray ity audiobook ity amin'ny alàlan'ity fampiasa ity.
Tena tsara ve izany raha ianao no mpanoratra ny boky navoaka tamin'ny endrika Audible? Fomba tsara indrindra hampiasana ny bokinao eo am-pelatanan'ny mpamaky!
Fampahafantarana: Resaka notohananay ity nosoratako ity tamin'ny anaran'ny Audible. Ny hevitra sy ny lahatsoratra dia ahy avokoa.
Tags: reaudiobookboky marketing
Emphatic: Ny media sosialy outsource dia vita tsara